नेपाल आज | चर्चित डेउडा गायिका सोभासँग रोचक गफः पहिले त चाखेकै हो, अचेल मन छैन ! (भिडियोसहित)
सोमबार, १७ मङि्सर २०७५
चर्चित डेउडा गायिका सोभासँग रोचक गफः पहिले त चाखेकै हो, अचेल मन छैन ! (भिडियोसहित)
गाउँदा गाउँदै भावुक बनेर रोएँ
बुधबार, १९ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित - प्रताव ओली
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लामा जन्मिएकी चर्चित डेउडा गायिका सोभा थापा अहिले साङ्गीतीक बजारमा निकै व्यस्त कलाकार मानिन्छन् । गायिका थापाले अहिलेसम्म ५०० बढी गीतमा स्वर दिईसकेको बताउँछिन् ।
उनले डेउडा गीतसँगै लोक दोहोरी र पुर्वेली गीतमा पनि आफ्नो स्वर बुलन्द गराएकी छन् । उनको जन्म भारतमा भयो । जन्मेको ५ वर्षसम्म भारतको वसाईपछि गायिका थापाका आमाबुबा जन्मथलो बाजुरा फर्किए ।
बाजुरामा हरेक चाडपर्व, मेलापात र घाँसदाउरा गाइने गीतको प्रभाव गायिका थापालाई अछुतो रहन सकेन । गायिका थापा सानैदेखि गीत गाउने, रेडियो सुन्ने गर्न थालिन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाजुराबाट धनगढी पुगेपछि थापाले गीत रेकर्डिङ् थालिन् ।
सुरुमा ३०० पारिश्रमिक लगेकी थापाले काठमाडौंसम्म आईपुग्दा आफ्नो रेट प्रति गीत ४००० लिईरहेको बताउँछिन् । डेउडा गीतको सानो बजार तर धेरै महत्व भएकाले डेउडा गीतमा पारिश्रमिक कम पाईने गरेको उनको बुझाई छ ।
२०६१ सालदेखि गायन क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेकी छन् । विभिन्न समस्यासँग सामना गर्दै कलाकार बन्ने आफ्नो चाहना पुरा गरेकी गायिका थापाले स्नाकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरिसकेकी छन् । डेउडा गीतको संरक्षण गर्नका लागि उनले अहिले अनामनगरस्थित आफ्नै विशेष डिजिटल स्टुडियो खोलेकी छन् ।
डेउडा गीतमा चर्चित गायिकाका रुपमा स्थापित ‘शोभा थापा’ सँग नेपालआजका लागि गरेको रमाईलो गफः
सादा खाना खान्छु, घरभित्रै पकाएको खाना मनपर्छ । खानाको रुपमा बिहान भात र बेलुकी रोटी र साग खान मनपर्छ । दिनको ३ चोटी खाने गरेकी छु ।
नेपालीपन अनुसार गाजल, लिपिष्टिक जस्ता सामान्य क्रिम प्रयोग गर्छु ।
घरमा कुर्ता सुरुवाल घरायसी रुपमा प्रयोग गर्छु । बाहिर जाँदा प्रायः सारी र चोली लगाउँछु । सपिङ् जाँदा श्रीमान र साथिहरुसँगै लिएर निस्कन्छु । मैले श्रीमानको लागि रोजिदिन्छु र श्रीमानको रोजाई अनुसार म पनि सपिङ् गर्छुृ । मध्यम खालका लुगाकपडा किनमेल गर्छु ।
म प्रायः सबै ठाउँ घुमेकी छु । पोखरा घुमेकै मध्ये मनपरेको ठाउँ हो । अब मैले जोमसोम र रारा ताल जाने ठुलो योजना बनाएकी छु ।
मैले धेरै ठुलो भुल गरेँजस्तै लाग्छ । सायद राजनीति गरेकी हुँन्थे भने अहिलेसम्म म अनेरास्ववियुकी होनाहार विद्यार्थी नेता हुन्थे होला । गायिका भएर पनि पछुतो त छैन । तर यहाँभन्दा धेरै प्रगति राजनीतिमा गर्थेँ होला । अझंैसम्म कुशल राजनिज्ञ बन्ने धोको उद्येश्य मरेको छैन । देशलाई निकास दिने र विकास समृद्घि ल्याउने राजनीति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । मैले मन पराएका नेता गगन थापा, नबिना लामा, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड हुन् ।
सानो छँदा चाखेकी छु । अहिले त्यसको फिलिङ् नै बिर्सिसकेँ । अहिले लागुपदार्थबाट टाढै छु ।
म बालसमुह र राजनीतिमा सक्रिय मान्छे हुँ । मैले श्रीमान बाहेक कसैसँग प्रेम गरिनँ । मलाई धेरै प्रेम पत्र नआएका होईनन् । कसैले कसैले त प्रेमपत्रमै डेउडा गीत लेखेरै पठाउँथे मैले वास्ता गरिन । अहिले श्रीमानसँग धेरै सन्तुष्ट जीवन जीईरहेकी छु ।
म सानो कुरामा डराउँछु, मृत्युदेखि धेरै डराउँछु । थाईराईड रोगी भएकाले छिटै मरिहाल्छु जस्तो लाग्छ । सर्प, कुकुर देखेपछि त्यो बाटो हिँड्नै सक्दिनँ । कहिलेकाँही सारो तनाव हुँदा त मर्न मन लाग्थ्यो पहिले पहिले तर अहिले केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
डेउडा कलाकार गायिका सोभा थापा
‘हाम्रैै मान्छे केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्छ’ भनेपछि कुुरा बुझ्यौं (भिडियोसहित)
सोमबार, ३० पुष २०७५
हामी परम्परागत दलभन्दा केही राम्रो हुन मात्रै मिसिएका थिएनौं (भिडियाेसहित)
आइतबार, २९ पुष २०७५
पशुपतिनाथलाई योजना बनाएरै विश्व सम्पदाबाट हटाइँदैछ (भिडियोसहित)
शनिबार, २८ पुष २०७५
२ सय ६ यात्रु बोकेको अन्नपूर्ण वाइडबडीमा माहुरी आक्रमण
बुधबार, ०२ माघ २०७५
भारतीय राजदूत पुरीलाई झुक्याएर कार्यक्रममा बोलाइयो
न नाना, न खाना, न छाना
शेखर कोइरालाले घोषणा नै गरे, अबको सभापतिमा मै उठ्छु
राजधानीमा नेपाल भारतका युवा उद्यमीलाई जोड्ने सम्मेलन हुने
लगातार दुई दिन उकालो लागेको सेयर बजार तेस्रो दिन पुनःओरालो लाग्यो
साना किसान लघुवित्तको २६ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम अबसर आज मात्रै
माछापुच्छ्रे बैंकको नेपालकै उत्कृष्ट स्मार्ट बचत खाता : ग्राहकलाई सुविधैसुविधा
समिटबारे भ्रम फैल्याइयो – युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित)
क्याक्स्टन मिडिया अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं : २७४ (सूचना बिभाग) पञ्चकुमारी मार्ग, नयांबानेश्वर काठमाडौं नेपाल (घर नं. २७३, नयांबानेश्वर स्थित पञ्चकुमारी मन्दिरको नजिकै)
++९७७ १ ४४८२९५१